HDPE Electrofusion Equal Tee ပေးသွင်းသူများနှင့်ထုတ်လုပ်သူများတရုတ် - စက်ရုံစျေး - Sunplast
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > HDPE ပိုက် fittings > HDPE Electrofusion Fittings > HDPE Electrofusion တန်းတူ Tee
HDPE Electrofusion တန်းတူ Tee
HDPE Electrofusion Equal Tee သည် SDR11 ရှိအရည်အသွေးနှင့်အရည်အသွေးမြင့် PE80 သို့မဟုတ် PE100 ပစ္စည်းများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော ၁၅ နှစ်နှင့်အကောင်းဆုံးအရည်အသွေး၊ အကောင်းဆုံးယှဉ်ပြိုင်နိုင်သည့်လက်ကားစျေးနှုန်း၊ ပုံမှန်အရွယ်အစားအတွက်စတော့ရှယ်ယာအမြန်ပေးပို့နိုင်ခြင်းနှင့်ပုံမှန်အပြင်သို့ရရှိနိုင်ပါသည်။ HDPE Electrofusion Equal Tee အကြောင်းအသေးစိတ်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ။
HDPE Electrofusအိုင်းယွန်း တန်းတူ Tee
HDPE ၏ Electrofusအိုင်းယွန်း သည်အတွင်းပိုင်းပတ် ၀ န်းကျင်တွင်ကြေးနီဝါယာကြိုးသေးသေးလေးများပါသော electrofusအိုင်းယွန်း fittings ကိုအသုံးပြုသည်။ ထို့နောက်လျှပ်စစ်စီးကြောင်းသည်ဝါယာကြိုးများမှတစ်ဆင့် electrofusအိုင်းယွန်း processor ကို အသုံးပြု၍ အ ၀ တ်အထည်များ၏အတွင်းပိုင်းနှင့်ပိုက်၏အပြင်ဘက်တွင် HDPE အရည်ပျော်သွားစေသည်။
SUNPLAST ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် DN20mm မှ DN630mm အထိ electrofusအိုင်းယွန်း fittings အမျိုးမျိုးကိုထောက်ပံ့ပေးနိုင်သည်။ ဥပမာ coupler, reducer, tee tee, tee လျှော့ချခြင်း, 90 ° db တံတောင်ဆစ် 45o၊ တံတောင်ဆစ် ၄၅ °။ PE100 + အုပ်စုမှအတည်ပြုပြီးအရည်အသွေးမြင့် PE80 သို့မဟုတ် PE100 ကုန်ကြမ်းများကို HDPE ဓာတ်ငွေ့နှင့်ရေပိုက်လိုင်းစနစ်တွင်အသုံးပြုသည်။
SUNPLAST HDPE electrofusအိုင်းယွန်း fittings သည် EN12201-3, EN1555 & EN ISO 15494 စံနှုန်းများနှင့်အပြည့်အဝကိုက်ညီမှုရှိသည်။ အခြား HDPE ပိုက် fittings များနှင့်နှိုင်းယှဉ်ခြင်းအားဖြင့် (socket fusအိုင်းယွန်း fittings, butt butt fusအိုင်းယွန်း fittings စသည်ဖြင့်) HDPE electrofusအိုင်းယွန်း fittings သည်အောက်ပါအားသာချက်များရှိသည် -
“ ပစ္စည်းကိရိယာများရွေ့လျားမှု (အလေးချိန်နိမ့်ခြင်း / ကုန်ကျစရိတ်သက်သာခြင်း) ကိုအလွယ်တကူရွှေ့ပြောင်းနိုင်သည်။
DN25-50၀ မီလီမီတာ (အပြင်ဘက်အချင်း)
HDPE Electrofusအိုင်းယွန်း တူညီသော tee fittings များကို SDR11-PN16 ရှိ dn25mm မှ dn500mm မှအောက်ဖော်ပြပါအတိုင်းရရှိနိုင်သည်။
HDPEElectrofusအိုင်းယွန်း Equal Tee
SUNPLAST HDPE pipe fittings owe high reputatအိုင်းယွန်း of good quality in our exporting markets. The fittings have been exporting to more than 15 countries, and all our customers are satisfied on us.
hot Tags:: HDPE Electrofusion Equal Tee, တရုတ်၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူများ၊ ထုတ်လုပ်သူများ၊ စက်ရုံ၊ စက်ရုံများ၊
Electrofusion TeeHDPE Electrofusion TeeHDPE ပိုက် Electrofusion TeeElectrofusion Tee FittingsElectrofusion FittingsHDPE Electrofusion FittingsPoly Electrofusion FittingsHDPE ပိုက် Electrofusion FittingsPoly Electrofusion TeeElectrofusion ဓာတ်ငွေ့ Fittings
HDPE Electrofusion 45 ဒီဂရီတံတောင်ဆစ်
HDPE Electrofusion 90 ဒီဂရီ Elow
Tee လျှော့ချ HDPE Electrofusion